"Dia nandao ny sininy ravehivavy ary nankany an-tanàna ka nanao tamin’ny olona hoe: Andeha hizaha izaroa Lehilahy izaroa, Izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra; Izao angaha no Kristy?" Jaona 4:28-29
Teo anilana fantsakana dia nisy vehivavy iray vao nifanena tamin’i Jesosy; Izy dia naneho ny tenany taminy ho Ilay mahafantatra ny zava-miafin’ny fo, sy manome ny ranon’aina. Izy no Kristy, resy lahatra ny amin’izany ravehivavy ankehitriny. Ahoana anefa no hatao, hampitana izany vaovao mahafaly izany amin’ny manodidina azy? Ho azony natao ny nanandrana nilazalaza ny momba Azy, na niresaka izay nambarany taminy. Tsia, tsotra kokoa izy, mivantana kokoa, maharesy lahatra kokoa. Izao ihany no nolazainy: “Andeha hizaha izaroa Lehilahy izaroa, Izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra”. Nihevitra izy fa tsy olona tsotra fotsiny ny olona izay nahay nampihanjahanja teo imasony ny tsiambaratelo miafina indrindra ao amin’ny fiainany : tsy maintsy ho Ilay Mesia Izy, araka izay nolazainy taminy; ary marina ny fihevitr’ilay vehivavy.
Tsy misy mahay mamaky ny ao anaty fo, afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Fantany tanteraka ny fon-janak’olombelona. Ary ambarany amintsika. Ny Baiboly no hafatra nampitainy an-tsoratra ho antsika tsirairay. Rehefa mifantoka mamaky azy dia aharihariny ny hevitra, ny fihetsehampo, ny faniriana, ny fitiavana, ny nofinofy ary ireo ampahany miafina indrindra amin’ny toetra amam-panahintsika. Rehefa mamaky azy isika dia manatrika an’Andriamanitra ary mahatsapa ny heriny (Hebreo 4:12). Fehezanteny iray dia mety ho ampy. Andininy iray, fiteny tsotra iray dia hanazava ny ao anatintsika, tahaka ny tara-pahazavana matanjaka. Aoka tsy hitodi-damosina. Mampiharihary ny ratsy ny Tenin’Andriamanitra, kanefa koa mitondra ny vahaolana avy amin’Andriamanitra.